China FC-040 Single wokufaka Uhlobo Intelligent lokushisa Isilawuli Umkhiqizi kanye Umthengisi | Gongyi
FC-040 Single wokufaka Uhlobo Intelligent lokushisa Isilawuli
FC1-040 uchungechunge control lokushisa imitha imfundo manualThe imitha has international ejwayelekile ubukhulu bangaphandle 3-key mnene push inkinobho kulungiselelwa, umugqa owodwa, 3-LED ukubonisa: iphutha lokushisa ungalungisa, imitha has ukushisa noma ukupholisa umsebenzi, unga ukukhetha ngokukhululeka. It usebenzisa / OFF sikhangiso ...
FC1-040 uchungechunge temperature control meter instruction manual
Imitha has international ejwayelekile ubukhulu bangaphandle 3-key mnene push inkinobho kulungiselelwa, umugqa owodwa, 3-LED ukubonisa: iphutha lokushisa ungalungisa, imitha has ukushisa noma ukupholisa umsebenzi, unga ukukhetha ngokukhululeka. It usebenzisa / OFF ukulungiswa, ukubuya umehluko kungase kushintshwe, ukulawula ngokunembile kuphezulu.
Ⅰ, sebhithi Technical
1, uhlobo wokufaka: NTC10K (B = 3380)
2, lokushisa isibonisi uhla: -50 ~ 150 ℃
3, edluliselwe okukhipha contact umthamo: 7A 240VAC
4, ubukhulu bangaphandle (mm): 76 × 34 × 72 Usayizi imbobo (mm): 70 × 28
5, amandla Ukusebenza: AC110 ~ 242V, 50 / 60HZ, amandla ukushabalalisa lingaphansi kuka 3W
6, Ukusebenza imvelo: lokushisa 0 ~ 50.0 ℃, isihlobo humidity≤85% RH, ngaphandle adle futhi eqinile emisebeni kagesi.
Ⅱ ,I kwangaphakathi nemingcele
Ⅲ, Usebenza indlela:
Cindezela ▲ noma ▼ ukhiye 3 yesibili, inani isethi futhi "" bonisa nge ematfuba, cindezela ▲ noma ▼ ukhiye ukulungisa, cindezela ukhiye ISETHI ukuze ngiwusindise uphinde uphume. Noma ungazi cindezela noma iyiphi ikhi bese ulinda 10 okwesibili, auto imitha ugcine futhi exit.1, lokushisa setha value set:
2, yesibili imenyu imingcele guqula:
Cindezela ISETHI ukhiye we bo-3 ukungena imenyu yesibili Amapharamitha isimo ukuguqulwa, ikhodi ipharamitha futhi lepharamitha ukubonisa ematfuba, cindezela ▲ noma ▼ ukhiye ukuze ulungise lepharamitha, isikhathi eside cindezela isikhathi ukhiye Ingasheshisa. Ngemva kokulungiswa, cindezela ISETHI ukulondoloza futhi singene isimo kohlaka esilandelayo. Uma ungenzi noma yisiphi maphakathi kokuhlinzwa, imitha ngeke ulinde 10s, auto ugcine uphinde uphume.
3, Control okukhipha:
Ukushisisa: (Lapho ipharamitha ye ukukhetha)
Lapho value≤ kulinganiswa (value set Inani -return umehluko), PHUMA edluliselwe contact ngokuvamile evulekile axhunyiwe futhi OUT ikhomba ukukhanya ivuliwe, heater isebenza;
Lapho value≥ kulinganiswa (isethi ukubaluleka + ukubuya umehluko value), PHUMA edluliselwe contact ngokuvamile evulekile unqamukile futhi OUT ikhomba ukukhanya iphelelwe, ukusebenza heater stop.
Ukubandisa: (Lapho ipharamitha ye ukukhetha)
Lapho value≥ kulinganiswa (isethi ukubaluleka + ukubuya umehluko value), PHUMA edluliselwe contact ngokuvamile evulekile axhunyiwe futhi OUT ikhomba ukukhanya ivuliwe, esiqandisini isebenza;
Lapho value≤ kulinganiswa (isethi ukubaluleka -return umehluko value), PHUMA edluliselwe contact ngokuvamile evulekile unqamukile futhi OUT ikhomba ukukhanya iphelelwe, ukusebenza esiqandisini stop.
4, The imitha babe ifriji ukubambezeleka umsebenzi: Lapho ugesi ivuliwe noma uqale kabusha compressor, kudingeka ungase ulibale, isikhathi ukubambezeleka kusethwa ipharamitha.
Ⅳ , isikimu Connection ( uthintane)
Ⅴ , Fault Analysis Clearance
Imitha usebenzisa isihambile inqubo ukukhiqizwa, futhi ube isivivinyo esiqinile ngaphambi kokushiya kwemboni, ke ngcono ukuthembeka imitha .I iphutha evamile kubangelwa ukusebenza okungalungile noma kulungiselelwa ipharamitha .Uma ukuthola iphutha ayikwazanga ukubhekana nawo, sicela ukuqopha, futhi uxhumane ne-ejenti noma kithi. Ishidi 5-1 iphutha evamile imitha e isicelo nsuku zonke:
Ishidi 5-1 iphutha Common handling
★ bathi: inkampani yethu kuyothuthuka ubuchwepheshe umkhiqizo, umklamo kanye esifakiwe. Uma ushintsho, sicela okubeka ukuba le izinto , without notice.
Previous: XMT-908 Series Universal wokufaka Uhlobo Intelligent lokushisa Isilawuli
Okulandelayo: XMT-3000 Series Single wokufaka Uhlobo Intelligent lokushisa Isilawuli
XMT-9000 Series Uhlobo wokufaka Single Intelligent ...
XMT-908P Series Intelligent Tem ehlelwe ...
XMT-JK208 Series Multi Indlela Intelligent Tempera ...
Digital Temperature Controller, Temperature Isilawuli, 4-20ma Pt100 Temperature Transmitter, PID lokushisa Isilawuli Ukuze umshini , PID lokushisa Isilawuli , Zonke Imikhiqizo